Thanks you All | K
4 Replies	ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၈ရက်နေ့က ကျွန်တော် အသက် ၂၀ ပြည့်မွေးနေ့ပေါ့။ အစကတော့ ဘာအစီအစဉ်မှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ နှစ်တိုင်းလည်း မွေးနေ့ဆိုတာ ကျွန်တော် အထွက်တခြားနေ့တွေလိုပဲ ထူးထူးခြားခြားဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အိမ်မှာ အမေနဲ့ Birthday Cake လေးလုပ်တာ လောက်ပဲရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်တော့ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရလာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း Facebook မှာဆိုရင်လည်း Birthday Wish အများကြီးရခဲ့တယ်။ ပျော်တာပေါ့ !
ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ Kami တို့သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်နဲ့ ပေါင်းပြီး MMOtaku.net ဆိုပြီး Anime Website လေးတစ်ခုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အစကတော့ အကြီးကြီး စဉ်းစားထားကြတယ်။ ကိုယ်ပိုင် File Server ထားပြီးတော့ Anime Download ဆွဲလို့ရဖို့အထိပါ စဉ်းစားထားခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကြောင့် ရိုးရိုးတန်းတန်း WordPress Based နဲ့ပဲလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ Site လေးလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပဲ Otaku အများစု စုစည်းဖြစ်သွားကြပြီး Anime Give/Share တွေလုပ်ဖြစ်လာကြတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်း Myanmar Otaku, YGN Otaku Organization တို့မှာ active ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ မမီမီ, မိုးသုတ, Shiro Sora, Hong Xing တို့အပါအဝင် တခြား သူငယ်ချင်းအများစုလည်း ရလာတယ်။ ပျော်ဖို့ကောင်းလာတာပေါ့။ Anime တွေ ပိုကြည့်လာဖြစ်တာနဲ့အမျှ ကျွန်တော့် Blog ကလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ Post တွေနည်းလာခဲ့တယ်။ ( အားလုံးလည်း သတိထားမိမှာပါ )။ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Tutorials အများစုကိုတော့ မြန်မာကျူတိုရီယယ်မှာ သွားသွားရေးဖြစ်နေတော့ ဒီမှာ ဘာမှကို မလုပ်ဖြစ်တော့တာ။ Anime ကတော့ ပိုဆိုးပေါ့။ MMOtaku မှာပဲ တင်ဖြစ်နေတယ်။ ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ လက်ဆောင်ရတာဆိုလို့ မေမေရယ်၊ ဆုမြတ် ရယ် နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ် ( ဝါးတီး သမားတွေများတယ် XD )။ ဒါပေမယ့် Birthday Wish နဲ့တင်လုံလောက်ပါတယ်။ သြော်… ကိုယ့်ကို ဒီလောက် အလေးထားတဲ့ Friend တွေဒီလောက်များမှန်း အခုမှ သိတော့တယ်။ သူငယ်ချင်း အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ !!! ^^
This entry was posted in Nothing and tagged Birthday, Wish on December 11, 2011 by K.	Post navigation
← Facebook Comments without Plugins
Starting to write about Perona →
4 thoughts on “Thanks you All”	Jia Li December 13, 2011 at 3:38 am	အားလုံးနီးပါး အကြောင်းပါပြီး Nakama တွေအကြောင်းတစ်စိမှတောင်မပါပါလား …
Reply ↓	K Post authorDecember 13, 2011 at 6:11 am	Nakama တွေအကြောင်းကို ပြောစရာကို မလိုတာလေ . . . စိတ်ထဲမှာရှိပြီးသားပါ။ xD
Reply ↓	layaung January 20, 2012 at 2:46 pm	myanmar links ကဘယ်မှာရှိလဲမသိဘူး
Reply ↓	K Post authorJanuary 27, 2012 at 3:13 pm	စံရိပ်ငြိမ် ၄ လမ်းဘေး ရွှင်ရီစားသောက်ဆိုင်တိုက်အပေါ်လေးလွှာပဲဗျ။ တိုက်နံပါတ်တော့ မသိဘူး။ MyanmarLinks ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တော့ရှိတယ်။